People - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Hafatra iray avy amin'ny CEO
Ny fahamendrehana 、 ny famokarana sy ny fanavaozana dia lafiny lehibe amin'ny tontolon'ny orinasa manerantany ankehitriny. Ny tanjon'ny orinasantsika dia ny kendrena hamaly ireo fitakiana ireo.
XY Tower Co., Ltd. dia hita tamin'ny 2008 fony izy orinasa vao manomboka. Eo ambany fitarihan'ny fitantanana sy ny ezaka ataon'ny mpiasa rehetra, XY Tower izao dia namorona mpanamboatra tilikambo matihanina ary iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ity orinasa ity any andrefan'i Sina.
XY Tower dia manolotra "magazay tokana" ho an'ny varotra varotra fitaovana elektrika, famoronana tilikambo ary famokarana tilikambo.
miaraka amin'ny fanohanan'ny injeniera matihanina sy injeniera matihanina, XY Tower dia manome vokatra sy serivisy mifaninana amin'ireo mpanjifanay. XY Tower dia manana ny anton-javatra rehetra; teknolojia, rafitra fitantanana, olona ary tanjaka ara-bola ho lasa mpanome tolotra lehibe any Shina sy any ivelany.
Manana ekipa matihanina sy azo antoka izahay. Tena za-draharaha izahay mahalala ny fomba hamenoana ny takian'ny mpanjifa. Ary matoky izahay fa hanao vahaolana tena tsara ary hiantoka fa miasa tanteraka ny vahaolana, miasa tsara ary miovaova foana amin'ny fotoana rehetra.
Ny fitantanana anay dia manana traikefa miasa mandritra ny 30 taona eo amin'ity indostria ity ary faly amin'ny fahafahan'ny orinasa misy eo amin'ny tsena.
Faly aho mahita ny rafi-pitantanana matotra, mpiasa mafana fo mafana fo ary ekipa matihanina hamaly ny filan'ny orinasa ankehitriny sy ho avy. Anjarantsika mpanjifa sarobidy izao no manapa-kevitra, hatraiza ny fahombiazan'ny XY Tower tamin'ny fihaonana na nihoatra ny fanantenany ary manome valin-kafatra aminay amin'ny fomba tsara kokoa hanompoana azy ireo.
Manantena mafy aho fa miaraka amin'ireo mpanjifantsika vaovao sy mahazatra, andao hiara-mamorona ho avy tsaratsara kokoa isika!
Chunjian Shu (filohan'ny birao)
Andriamatoa Shu dia injenieran'ny herinaratra zokiolona efa za-draharaha 40 taona amin'ny indostrian'ny herinaratra. Nanana traikefa niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sampana famokarana rano sy herinaratra ao amin'ny governemanta faritanin'i Sichuan izy ary avy eo nanomboka ary nitantana orinasa tena nahomby tamin'ny sehatry ny jiro sy ny fifandraisan-davitra.
Andriamatoa Shu dia manana asa tena mahomby amin'ny sehatry ny governemanta ary mitantana ny fampandrosoana ny orinasa. Nasehony ny fitarihany ary manana saina mivoatra ao anatiny izy.
Andriamatoa Shu dia nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny tena manentana sy mahay
ekipa matihanina. Mpitantana orinasa mahomby izy ary nampiditra hevitra vaovao amin'ny fananganana fananganana herinaratra.Andriamatoa Shu dia optimista tanteraka ary mino ny miasa mafy. Miompana amin'ny famoronana lanja ho an'ny tompon-tany sy ny fiarahamonina izy.
Yong Lee (Tale Jeneraly)
Andriamatoa lee, nahazo diplaoma amin'ny fitsaboana metaly avy amin'ny Oniversiten'i Hebei momba ny siansa sy ny teknolojia.
Andriamatoa Lee dia nanomboka ny asany tao amin'ny Bureau of Geological Prospecting any atsimo andrefan'ny China tamin'ny 1980. Avy eo dia niasa tamina mpanamboatra tilikambo fanjakana iray izay nanana mpiasa 700 nandritra ny 20 taona.
Andriamatoa Lee dia manana traikefa tena manan-karena amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana samihafa izay misy ny sehatry ny governemanta, orinasam-panjakana ary orinasa tsy miankina. Manana rakitsoratra efa voaporofo izy fa nahavita nitantana orinasa mpamokatra ambaratonga lehibe.
Amin'ny maha-mpitarika azy, ny fahaizany mandamina ekipa filan'ny nofo mifamatotra tsara mifanaraka amin'ny fahitany dia nahatonga ilay orinasa hahatratra toerana mendri-piderana eto amin'ny firenena.
Andriamatoa Lee dia manam-pahaizana amin'ny indostrian'ny galvanized mafana manana ny lazany any atsimo andrefan'ny China. Mahay izy amin'ny fiatrehana ny fitsaboana amin'ny sehatry ny tilikambo any amin'ny faritra avo harafesina.
Willard Yue Shu (Talen'ny asa any ivelany)
Andriamatoa Shu dia nahazo ny mari-pahaizana ambony amin'ny fitantanana amin'ny fitantanam-bola iraisam-pirenena avy amin'ny University of Glasgow, Britain. Manana traikefa niasa mandroso folo taona tao amin'ny Venture Institution izy. Izy no mitantana ny raharaham-bolan'ny orinasa, Human Resource ary orinasa ivelany. Tena be zotom-po amin'ny fandrosoan'ny orinasa sy ny fanavaozana ara-teknika izy.
Mahafantatra tsara ny teknika fitantanana orinasa maoderina izy ary manana traikefa manan-karena amin'ny fitsipi-panombantombanana ny teti-bola, ny fandrindrana ny tetikasa ary ny fampiasam-bola fanombohana hi-tech. Manana fahaiza-manao miavaka izy hitarika ekipa iray sy hanolotra serivisy mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa.
Izy koa dia nitarika ny ezaka amin'ny fananganana orinasa any ivelany an'ny orinasa. Ny fitarihany mavitrika sy ny fomba fijery manerantany dia hitarika ny orinasa hanitatra ny faravodilanitra mihoatra ny sisintany anatiny.
Lehiben'ny injenieran'ny tetikasa, miaraka amin'ny traikefa an-tilikambo vy mandritra ny 20 taona, manam-pahaizana fanta-daza indrindra amin'ny sehatry ny tilikambo fitaterana vy vy. Ny ekipa injeniera dia misy olona 6, samy manana ny traikefa niainany 5-20 taona. Ny injeniera sasany dia mahay mandefa tilikambo fandefasana ary ny sasany mahay amin'ny tilikambon'ny fifandraisana. Ny injeniera rehetra dia hiezaka hitady vahaolana feno ho an'ny tetikasa tsirairay miaraka amin'ny zavatra niainany lehibe.
Mpitantana ny famokarana, manana traikefa famokarana tilikambo 16 taona, izay tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny famokarana ny tilikambo manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny vokatra vita. Miisa 115 ny olona ao amin'ny ekipa mpamokatra ary fitaovana vy 30.000 taonina no hamokarana isan-taona.
Mpanara-maso galvanizing mafana mandroboka, izay nirotsaka tamin'ny indostrian'ny galvanizing nandritra ny 25 taona, tompon'andraikitra tamin'ny famolavolana karazana vy, nitarika ekipa olona 30, manana traikefa manankarena hiantohana ny kalitaon'ny HDG.
Lehiben'ny injenieran'ny sary avo lofting, miaraka amin'ny traikefa amin'ny asa lofting 11 taona. Ny ekipa iray manontolo dia olona 5, ny tsirairay dia mandany 3-5 andro fotsiny hamaranana ny fisokafan'ny tilikambo karazana 1.
Inspecteur material, misy olona 5 ao amin'ny ekipa mpanara-maso ara-materialy, samy manana ny taratasy fanamarinana "mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana ho an'ny mpiasa fanandramana fitaovana" ny tsirairay, ho azon'izy ireo antoka fa mihoatra ny 99.6% ny tahan'ny vokatra na ny 99.6%, 100% ny taha.
Sales Rep, Shirley Song dia mpivarotra be fitiavana, manam-paharetana ary matihanina, izay niasa tao amin'ny XY Towers nandritra ny 10 taona mahery ary mahafantatra tsara ny tilikambo vy.
Sales Rep, tovovavy iray izay manome lanja be ny mpanjifa ary mirehareha amin'ny tenany ho mpivarotra, liana fatratra amin'ny tilikambo vy, manantena ny hanome vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa tsirairay.
Zhonghai He Head of Logistics Department
Izy dia tompon'andraikitra amin'ny lozisialy an-trano sy any ivelany nandritra ny 12 taona tao amin'ny XY Tower. Iza no tena mahalala ny fizarana sy fandefasana kaontenera sy seranan-tsambo mifanentana amin'ny karazana vokatra.